१३औं संक्रमितको रिपोर्ट : र्‍यापिड टेष्टमा नेगेटिभ, पीसीआर टेष्टमा पोजेटिभ आयो ! - ePosttimes
Homeसमाचार१३औं संक्रमितको रिपोर्ट : र्‍यापिड टेष्टमा नेगेटिभ, पीसीआर टेष्टमा पोजेटिभ आयो !
१३औं संक्रमितको रिपोर्ट : र्‍यापिड टेष्टमा नेगेटिभ, पीसीआर टेष्टमा पोजेटिभ आयो !
१ बैशाख २०७७, सोमबार ०७:३६ समाचार, हाम्रो सरोकार 0
धनगढी । र्‍यापिड टेष्टमा नेगेटिभ आएपछि घर पठाइएकी कैलाली, लम्किचुहाकी एक महिलामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण पुष्टि भएको छ । ६५ वर्षीया महिलामा कोरोना संक्रमण पुस्टि भएको हो ।
उनी वीरगञ्ज नाकामा चिया बेच्थिन् । लकडाउनका कारण समस्यामा परेकाहरू उनीसहित १७ जनालाई स्थानीय प्रशासनले उद्दार गरेर चैत १७ मा मात्र कैलालीको लम्की पठाएको थियो ।
उनीहरूलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले लम्की बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा राखेका थिए । ‘हामी नेपालबाटै आएका हौं, घरमै बस्छौं भनेका थिए । हामीले हुँदैन भनेर क्वारेन्टाइनमा राखेका थियौं,’ लम्किचुहाका मेयर महादेव बजगाईंले भनेका छन् ।
क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको र्‍यापिड टेष्ट किटबाट परीक्षण गरिएको थियो । रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनीहरुलाई २८ चैतमा घर पठाइयो । उनी पनि भुरूवास्थित आफन्त कहाँ गएकी थिइन् ।
तर पीसीआर बिधिबाट गरिएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
अब उनीहरु सबैलाई फेरि क्वारेन्टाइनमा राख्ने तयारी भइरहेको छ ।
कोरोना संक्रमण देखिएन भनेर घर पठाइएको व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको कैलालीको यो दोस्रो घटना हो ।
यसअघि चौथो संक्रमितको आफन्तलाई पनि सुरुमा क्वारेन्टाइनमा राखेर कोरोनाको लक्षण नदेखिएको भन्दै घर पठाइएको थियो । तर पछि परीक्षण गर्दा उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
303800cookie-check१३औं संक्रमितको रिपोर्ट : र्‍यापिड टेष्टमा नेगेटिभ, पीसीआर टेष्टमा पोजेटिभ आयो !yes
भारतमा कोरोनाबाट मृतकको संख्या १३ पुग्यो, ६०० बढी संक्रमित मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार व्यवस्थापन समिति गठन बैशाख ३ सम्म लकडाउन थप्ने सरकारको निर्णय, लकडाउनलाई पुर्णरुपमा पालना गर्न नागरिकलाई आब्हान प्रदेश १ को कोरोना जनसुरक्षा कोषमा ११ करोड ८५ लाख जम्मा लकडाउन थप कडा , धरान तथा इटहरीमा लकडाउन उल्लंघन गर्ने १६७ जना प्रहरीकाे नियन्त्रणमा यायोक्खा इटहरीद्वारा एक लाख राहत रकम प्रदान सेती अञ्चल अस्पतालमा भर्ना भएका कोरोना संक्रमित युवक डिस्चार्ज हुदै हतुवागढी भोजपुरका कोरोना संक्रमित यूवा बिराटनगर ल्याउने तयारी हुदैँ, भोलि मुख्यमन्त्री शेरधन राई स्वास्थ्य सामग्री सहित हतुवागढी आउदै
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीबाट १८ लाख ४८ हजार संक्रमित, एक लाख १४ हजारको मृत्यु